लामो समयदेखि रोकिएको ‘भद्रगोल’ यो साताबाट फेरि आउँदै – www.agnijwala.com
लामो समयदेखि रोकिएको ‘भद्रगोल’ यो साताबाट फेरि आउँदै
नेपाल टेलिभिजनको टेण्डर प्रक्रिया र समय हेरफेरको कारण रोकिएको हाँस्य टेलिश्रृङ्खला ‘भद्रगोल’ यो हप्ताबाट फेरि प्रशारणमा आउने भएको छ।
टेण्डर प्रक्रिया र समयको कुरा मिलेपछि यो हप्ताको शुक्रबार पुरानै समयमा सिरियल आउने भएको हो।
यसका लागि भद्रगोल टिम बुधबार छायांकनमा गएको छ। पछिल्लो समयका निकै नै चर्चित हाँस्य टेलिसिरियल बन्द हुदाँ धेरै दर्शकहरु दुःखी भएका थिए। बेलाबेलामा भद्रगोल बन्द किन भएको हो? यसबारेमा भद्रगोलका निर्देशक तथा कलाकार अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ले बन्द हुनुमा आफूहरुको हात नभएको बताए। उनले आफूहरुको काम सिर्जना गर्न भएको र त्यसका लागि स्क्रिप्ट र कलाकार सधैँ तयार रहेको उनले बताए।
‘हाम्रा दर्शकलाई खुराक पस्कन हामी सधैँ तयार छौँ’, उनले भने, ‘तर बेलाबेलामा आर्थिक पाटोका कारण, टेलिभिजन तथा मिडिया हवका विविध कारणले गर्दा निरन्तरता नभएको हो। यसबाट हाम्रा दर्शकमा पर्न गएको असरप्रति हामी क्षमाप्रार्थी छौँ।’
लामो समयको अन्तरपछि आउने भद्रगोलमा यो साता के छ विशेष? कुमार कट्टेल जिग्री भन्छन्,‘यो साता पुरापुरी मनोरञ्जनको प्याकेज छ। साथमा दर्शकहरुको लागि सरप्राइज पनि छ।’ के हो त सरप्राइज? पाँडे उर्फ अर्जुन घिमिरे भन्छन्, ‘त्यो अहिले नखुलाउँ होला। अहिले भनियो भने त सरप्राइज नै भएन नी। यो शुक्रबार भद्रगोल हेर्नुहोस् तपाईंहरुको लागि सरप्राइज छ।’